साउन देखि शिक्षक र विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले भत्ता दिने,अरू के-के छन् सुबिधा ? « Bagmati Online
काठमाडौं । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले ब्यबस्था गरे अनुसार अब सरकारले शिक्षक र विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप सेवा सुविधा दिने तयारी गरेको छ । शिक्षा नीति अनुसार अब, दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई आवश्यकताका आधारमा थप दिने तयारी थालेको हो । ‘दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा थप सुविधा दिन सकिने व्यवस्था क्रमशः गरिनेछ ।’ भनेर शिक्षा नीतिमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरणको कार्यक्रम कहाँ पुग्यो ? कुन मोडालिटीमा भयो शिक्षक दरबन्दी मिलान
शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य अन्र्तगत दोश्रो चरणमा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण कार्य शुरु गरेको छ । गत पुस दुई गते शुरु भएको दरबन्दी मिलानको पहिलो चरणमा रिक्त रहेका दरबन्दीलाई मात्रै मिलान गरिएकोमा यस पटक भने दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरणको निर्णय गरिएको केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । दरबन्दी मिलानको यो चरणमा एक सय ६९ जनाको दरबन्दी स्थानान्तरण गरिएको छ भने दरबन्दी सहित शिक्षक स्थानान्तरण हुनेको संख्या एक सय दुई रहेको छ ।
महाश्रम कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा कूल ५७ हजार ५६ शिक्षक दरबन्दी कम भएको तथ्य उल्लेख गर्दै दरबन्दी पूर्ति गर्न विभिन्न ६ विकल्प सहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसरी दरबन्दी थप हुँदा ३१ अर्ब ६८ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैंया थप आवश्यक पर्ने कार्यदलको निश्कर्ष छ ।